Xamaas oo CARABTA ugu baaqday inay joojiyaan Khilaafkooda oo u midoobaan Israel • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xamaas oo CARABTA ugu baaqday inay joojiyaan Khilaafkooda oo u midoobaan Israel
Xamaas oo CARABTA ugu baaqday inay joojiyaan Khilaafkooda oo u midoobaan Israel
December 7, 2017 - By: HORSEED STAFF
Hogaamiyaha Xisbiga Xamaas ee Gaza Ismail Haniya oo shir jaraa’iid qabtay qadar yar kahor ayaa si adag uga jawaabay go’aankii Maraykanka ee magaalada Qudus, isagoo sheegay in go’aankan uu yahay fursad weyn oo laga rabo dalalka Carabta iyo Islaamka inay ku baraarugaan.
Ismail Haniya ayaa sheegay in heshiiskii 1993 ee loo yaqaan Oslo Accord ee lagu saxiixay Washington ee qorayey in Falastiin joojiso kacdoonka hubeysan ee ka dhanka ah Israel inta ay wadahadalka socdaan lagu hungoobay, eedaasna ay wax ka qaadanayaan hogaanka maamulka Falastiin oo iyagu rajo aan jirin ka qabay in Israel ay usoo celiso wixii ay xoog uga boobtay.
Waxaa ku faraxsanahay inay naga harto Riyadii Oslo Accord iyo culeyskii Falastiiniyiinta la dul dhigay, ayuu yiri.
Xamaas oo baaq u direysay dalalka Carabta ayaa sheegtay in marka hore laga rabo Falastiin inay ku midowdo kacdoon cusub oo ka dhan ah Israel, sidoo kale dalalka Carabta oo dhexdooda isku mashquulsan laga rabo in fursadan u adeegsadaan inay dhinac iska dhigaan khilaafkooda oo ay usoo jeestaan khatarta Israel oo halis ku ah Jiritaankooda iyo Sumcadooda.
“…Ma aqoonsanin Wax Israel la yiraaho..”
Haniya ayaa ku baaqay in hada wixii ka danbeeya ay u istaagaan in guud ahaan Falastiin la xoreeyo oo aan la ogolaan qorshaha laba dowladood maadaama Israel ay dhulkii oo dhan boobtay, isagoona sheegay in Qudus ay tahay Caasimada Falastiin una baahan tahay in loo xoreeyo sidii ay u xoreeyeen Amiirul Muslimiin Cumar RC iyo Salaxudiin.
Go’aanka Donald Trump oo caalamka si weyn u cambaareeyeen ayaa sidoo kale ka horimaanya dhamaan Qaraaradii kasoo baxay Qaramada Midoobay ee ku aadaan dhulka la heysto ee Falastiin.
Xoghayaha Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa xalay war uu saxaafada siiyey Sheegay in magaalada Qudus ay caasimad u tahay Falastiin iyo Israel oo aysan qolo kaliya gaar u yeelan karin, xalka kaliyana u yahay Laba dowladood oo deris ah inay noqdaan.